तपाईको बिक्री र उत्पादकत्व बढाउनुहोस् यी H ह्याक्सको साथ Martech Zone
यी ac ह्याकहरूको साथ तपाईंको बिक्री र उत्पादकता बढाउनुहोस्
सोमवार, मे 25, 2020 सोमवार, मे 25, 2020 एडम हेम्पेंस्टल
हरेक दिन, यस्तो देखिन्छ कि हामीसँग हाम्रो कामको हेरचाह गर्न कम समय छ। यो विरोधाभासपूर्ण छ किनकि त्यहाँ धेरै अनुप्रयोगहरू, ह्याकहरू र उपकरणहरू छन् जुन हामीलाई आजकल समय बचाउन मद्दत गर्दछ। यस्तो लागी धेरै सुझावहरू र युक्तिहरू जस्तै हामीलाई समय बचत गर्नुपर्दछ वास्तवमा हाम्रो उत्पादकत्वमा प्रमुख टोल लिनुहोस्।
म हरेक दिन मेरो समयको सदुपयोग गर्ने ठूलो प्रशंसक हुँ र म मेरा सबै कर्मचारीहरूलाई सकेसम्म फलदायी बनाउने प्रयास गर्छु - विशेष गरी बिक्री टीम, जुन कुनै सास कम्पनीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विभाग हो।
यहाँ केहि तरिकाहरू र उपकरणहरू छन् जुन म आफैं र मेरो बिक्री टीमलाई बढी समय बचत गर्न र हाम्रो समग्र उत्पादकत्व सुधार गर्न प्रयोग गर्दछु।
ह्याक १: तपाईंको समयलाई धार्मिक हिसाबले ट्र्याक गर्नुहोस्
मैले १० बर्ष भन्दा बढी समयदेखि टाढैबाट काम गरिरहेको छु र तपाईको कामको समयमा तपाईंको समय ट्र्याक गर्ने विचारलाई म एकदमै घृणा गर्दछु। मैले यसलाई कहिले पनि मेरो कर्मचारीहरूको जाँच गर्न प्रयोग गरेको छैन, तर मैले यो पाएँ यो वास्तवमै उपयोगी हुन सक्छ केहि अनुप्रयोगहरूका लागि।
करीव एक महिनाको लागि, मैले गरेको प्रत्येक कार्यको लागि मैले मेरो समय ट्र्याक गरें। जटिल कार्यहरूको लागि जस्तै हाम्रो मार्केटिंग योजनामा ​​काम गर्न जस्तै केहि ईमेलको रूपमा सरल। मैले मेरा कर्मचारहरूलाई उनीहरूको आफ्नै व्यक्तिगत रेकर्डहरूको लागि एक महिनाको लागि त्यस्तै गर्न प्रोत्साहित गरें। परिणामहरू आँखा खोलिरहेका थिए।
हामीले महसुस गर्‍यौं कि हाम्रो कति समय पूर्ण रूपमा बेकारका कामहरूमा व्यर्थ खेर गयो। सामान्यतया, हामीले हाम्रो दिनको प्राय: ईमेलहरू लेख्न र सभाहरूमा व्यतीत गर्‍यौं, धेरै थोरै वास्तविक काम गर्दै। एकचोटि हामीले हाम्रो समय ट्र्याक गर्न सुरु गर्यौं, हामीले महसुस गर्न सक्यौं कि हाम्रो समय वास्तवमै कति खेर फालियो। हामीले महसुस गर्‍यौं कि हाम्रो बिक्री टोलीले सीआरएममा डाटा प्रविष्ट गर्न धेरै समय खर्च गर्यो बरु संभावनाहरूसँग कुरा गर्न र हाम्रो बेच्न प्रस्ताव सफ्टवेयर। हामीले हाम्रो बिक्री प्रक्रिया र प्रोजेक्ट ब्यवस्थापन कार्यप्रवाहलाई अधिक समय-कुशल हुनको लागि पूर्ण रूपले ओभरल्याल गर्‍यौं।
उत्तम प्रस्तावहरूले तपाईंलाई मिनेटमा नै सुन्दर, आधुनिक प्रस्तावहरू सिर्जना गर्न सक्षम गर्दछ। यस उपकरणका साथ गरिएका प्रस्तावहरू वेब-आधारित, ट्र्याकेबल र उच्च रूपान्तरण हुन्। जब प्रस्ताव खोलियो जान्नु तपाईंलाई सहि समयमा पछ्याउँन मद्दत गर्दछ, र तपाईंले प्रस्ताव पनि डाउनलोड गर्दा, हस्ताक्षर गर्दा वा अनलाइन भुक्तान गर्दा पनि तपाईंलाई सूचना प्राप्त हुनेछ। तपाईंको बिक्रीलाई स्वचालित गर्नुहोस्, तपाईंको ग्राहकहरूलाई प्रभाव पार्नुहोस् र अधिक व्यापार जित्नुहोस्।
अझ राम्रो प्रस्तावका लागि नि: शुल्क साइन अप गर्नुहोस्
ह्याक २: प्रत्यक्ष भ्यागुता खाने?
पहिले, म प्रत्यक्ष भ्यागुताहरू खान सिफारिस गर्दिन। त्यहाँ मार्क ट्वेनको प्रसिद्ध भनाइ छ जसले तपाईंलाई भन्नु पर्छ कि प्रत्यक्ष भ्यागुता खानु बिहानको पहिलो चीज। यस तरिकाले तपाईले सब भन्दा खराब सम्भव कार्य गर्नु भएको छ जुन एक दिनमा हुन सक्छ र जे हुन्छ त्यो अझ राम्रो हुन सक्छ।
तपाईंको आफ्नै प्रत्यक्ष भ्यागुता तपाईंको कार्य सूचीको शीर्षमा बसिरहेको सबैभन्दा खराब सम्भावित कार्य हो। मेरो लागि, यो ग्राहक समर्थन टिकटहरू प्रबन्धन गर्दैछ। हरेक बिहान जब म मेरो ल्यापटप खोल्छु, म एक वा दुई घण्टा समर्पित गर्छु पढ्न र ग्राहकहरूको ईमेलहरूमा प्रतिक्रिया दिन। बाँकी दिन हावा जस्तो लाग्छ। मेरो बिक्री टोली को लागी, म उही चीज गर्न सिफारिस गर्दछु। बिभिन्न व्यक्तिहरु का के को बिचार को बिभिन्न बिचारहरु छन् प्रत्यक्ष भ्यागुता हो, त्यसैले म वास्तविक गतिविधि सुझाव गर्दैन, तर म बिहान सबैभन्दा नराम्रो, सबैभन्दा गाह्रो कामहरू गर्ने सिफारिस गर्दछु।
ह्याक:: तपाईको वेबसाइटको लागि सामाजिक प्रशारण
मार्केटिंग मार्फत बढी बिक्री पाउन समय र पैसा खर्च हुन्छ। यसबाहेक, ग्राहकहरु लाई प्राप्त गर्न नयाँ तरिकाहरु संग आउन धेरै अनुसन्धान र कडा मेहनत चाहिन्छ तर त्यहाँ कुनै अतिरिक्त पैसा खर्च नगरी बढि बिक्रीहरू प्राप्त गर्ने एउटा तरिका छ - सामाजिक प्रमाण प्रयोग गर्दै.
यस मार्केटिंग को रणनीति राम्रो अनुसन्धान र विभिन्न उद्योगहरु को एक नम्बर मा काम गर्न को लागी प्रमाणित छ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, तपाईको अवस्थित ग्राहकहरूको अनुभव प्रयोग गर्नु पर्छ तपाईको ब्रान्डको साथ अधिक ग्राहकहरूलाई तपाईसँग पैसा खर्च गर्न राजी गराउन।
लोकप्रिय सामाजिक प्रकारको समीक्षा, समर्थन, प्रशंसापत्र, रूपान्तरण सूचनाहरू र अन्य धेरै समावेश गर्दछ। त्यहाँ अधिक समकालीन विधिहरू जस्तै रूपान्तरण सूचनाहरू पनि छन्।
यदि तपाईंसँग पहिले नै सन्तुष्ट ग्राहकहरू छन् भने, उनीहरूको अनुभवहरू सही वेबसाइटमा तपाईंको वेबसाइटमा प्रयोग गर्नाले तपाईंको रूपान्तरण दरहरू र बिक्री संख्याहरूमा ठूलो असर पार्न सक्छ। जहाँसम्म, कुनै एक आकार फिट-सबै समाधान छ र यो सही सामाजिक प्रमाण सूत्र प्राप्त गर्न केहि प्रयोग लिन्छ। शुभ समाचार यो हो, यसले कार्य गर्दछ र यो राम्रो काम गर्दछ।
हैक:: बिक्री अनलाइन लिनुहोस्
धेरै बिक्री टोलीहरू अझै पनि पारंपरिक दृष्टिकोण प्रयोग गर्छन् जहाँ तिनीहरू सम्भावित व्यक्तिसँग सम्झौता बन्द गर्न चाहन्छन्। जबकि यसको धेरै फाइदाहरू छन्, त्यहाँ पर्याप्त डाउनसाइडहरू पनि छन्। प्रत्येक चोटि जब तपाईं बैठकमा जानुहुन्छ, तपाईं पर्याप्त समय र पैसा गुमाउनुहुन्छ, यदि यो थाहा छ कि बैठक बिक्रीमा परिवर्तन हुनेछ।
आजकल त्यहाँ धेरै उपकरणहरू छन् जुन टाढा टाढाको बिक्रीलाई सजिलो बनाउँदछ। सम्मेलन अनुप्रयोगहरू जस्तै जूम व्यक्तिमा एक बैठकको व्यवस्था गर्नु अघि तपाईंलाई भिडियो कल गर्न अनुमति दिनुहोस्। यस तरिकाले, यदि तपाईं बिक्री प्राप्त गर्नुभएन भने पनि, तपाईंले केवल पूर्ण दिनको सट्टामा तपाईंको १ of मिनेट समय गुमाउनुहुनेछ।
हैक:: तपाईको बिक्री र मार्केटिंग टोली प Al्क्तिबद्ध गर्नुहोस्
धेरै कम्पनीहरूमा मैले काम गरें, बिक्री प्रक्रिया एक सरल कारणको लागि बाध्य भयो। बिक्री विभागलाई यसको सामग्री र मार्केटि materials सामग्रीको साथ मार्केटिंग विभागले के गरिरहेको छ भनेर थाहा थिएन र एकै साथ मार्केटिंग विभागले दिनदिनै के-कस्ता बिक्री सामना गर्नुपर्दछ भन्ने बारे केही संकेत पाउँदैन। नतिजाको रूपमा, धेरै जानकारीहरू हराउँदछन् र दुबै विभागहरू कम प्रदर्शन गर्दछन्।
दुबै टोलीहरूलाई समान पृष्ठमा राख्न, नियमित बैठकहरू गर्नु महत्त्वपूर्ण छ जहाँ बिक्री र मार्केटिंग टीम नेतृत्व गर्दछ र सदस्यहरू सँगै बसेर प्रत्येक विभागमा के हुँदैछ भनेर छलफल गर्न सक्दछ। मार्केटिंगले ग्राहकसँगको बिक्री प्रतिनिधिहरूसँगको अन्तर्क्रियाको बारेमा जान्नु आवश्यक छ। त्यहि समयमा, बिक्री को लागी भर्खरको ग्राहक सामना सामग्री को बारे मा जान्नु आवश्यक छ ताकि नयाँ संभावनाहरु लाई सम्पर्क गर्दा तिनीहरू आफ्नो दृष्टिकोण पign्क्तिबद्ध गर्न सक्छन्। सबै यसले लिन्छ १। मिनेट प्रति हप्ता हो र दुबै तपाईंको टोली संचार र उत्पादकता सुधार हुनेछ।
हैक:: बिक्री बैठकहरूसँग अधिक सख्त हुनुहोस्
यदि बिक्री टोलीका कसैसँग सम्भावित ग्राहकहरूसँग बैठक छ भने, तिनीहरूसँग सबै समय संसारमा हुन्छ। यद्यपि आन्तरिक बैठकहरूको लागि हाम्रो समय धेरै सीमित छ। हामीले गरेको समय ट्र्याकिंग सम्झना छ? हामीले सिक्यौं कि हामीले हरेक हप्ता hours घण्टा बैठकहरूमा बितायौं जसले हाम्रो बिक्री लक्ष्यहरूको लागि पूर्ण रूपमा केही गर्दैन।
आजकल, हामी हाम्रो बैठकहरूको अधिकतम १ minutes मिनेटमा सीमित गर्दछौं। यस भन्दा बढि केहि ईमेलको योग्य छ र यो संकेत हो कि बैठक एजेन्डा ठीकसँग सेट गरिएको थिएन। हाम्रो कर्मचारी प्रशंसा छत को माध्यम बाट गएको छ र हामी आज समय धेरै समय बचाउँछौं - यो साधारण ह्याक को लागी धन्यवाद।
अन्तिम नोटहरू ...
एक ठूलो बिक्री टीम एक कम्पनी को लागी आवश्यक छ जसले आफ्नो राजस्व र बढ्नको सम्भावना वृद्धि गर्न चाहन्छ। यी केवल केही मुख्य प्रविधिहरू हुन् जुन हामी यो सुनिश्चित गर्न प्रयोग गर्दछौं कि हाम्रो बिक्री टोली सकेसम्म फलदायी छ, र म आशा गर्दछु कि तपाईं तिनीहरूलाई उपयोगी पाउनुहुन्छ। सायद यहाँको सब भन्दा महत्वपूर्ण टेकवे भनेको त्यो हो कि प्रत्येक उत्पादकत्व ह्याक स्वचालित र उच्च टेकमा उफ्रिदैन - तपाईं केवल आफ्नो दिनचर्या र बानीहरू परिवर्तन गरेर तपाईं अचम्मका चीजहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
टैग: रूपान्तरण सूचनाहरूअनुमोदनहरूमार्केटिंग र बिक्री पign्क्तिबद्धअनलाइन कन्फरेन्सिंगअनलाइन डेमोहरूअनलाइन बिक्रीप्रस्तावप्रस्ताव सफ्टवेयरसमीक्षाबिक्री र मार्केटिंग पign्क्तिबद्धताबिक्री बैठकहरुबिक्री उत्पादकताबिक्री प्रस्तावबिक्री प्रस्तावबिक्री ट्र्याकिंगसामाजिक प्रमाणप्रशंसापत्र
एडम हेम्पेंस्टल सीईओ र बेटर प्रोपोजलको संस्थापक हो, केहि मिनेटमा सुन्दर, उच्च प्रभाव प्रस्तावहरू सिर्जना गर्न सरल प्रस्ताव सफ्टवेयर। राम्रो प्रस्तावमा आफ्ना ग्राहकहरूलाई एक वर्षमा $ १२०,०००,००० + जित्ने सहयोगमा, उनले पहिलो प्रस्तावना लेखन विश्वविद्यालय सुरू गरे जहाँ उनले व्यापार प्रस्ताव सबै भन्दा राम्रो अभ्यासहरू साझा गर्दछ।
मैले मेरो महँगो वेबसाइट रिपोर्टिंग र दिबको लागि विश्लेषण उपकरणहरू रद्द गरें
Rep रिपोर्टहरू प्रत्येक B3B CMO लाई बाँच्न आवश्यक छ र २०२० मा फल्छ